Slimbook PROX 15: iyo nyowani ultrabook Apple Macbook mhondi | Linux Vakapindwa muropa
Kutora mukana weaya mazuva uine tarisiro yeKisimusi uye neiyo iri pedyo Nhema Chishanu / Cyber ​​Muvhuro, pamwe iwe ungade kuziva kuti iwe unayo imwe yeanonyanya kusimba maabookabook pamusika, akagadzirwa na iyo Spanish Slimbook uye zvakare neGNU / Linux mune ayo matumbo. Iyi laptop nyowani inounzwa se Apple Macbook kudzvinyirira, timu inosuruvarisa yakapararira kunyangwe nevamwe vashandisi veLinux vanosarudza iyo Hardware inopihwa neComppertino firm pane dzimwe sarudzo.
Kana iyo ProX yanga yatove chishamiso, iyi nyowani Slimbook PROX 15 zvakatonyanya kudaro kana zvichibvira. Uye mutengo wayo wakanyanya kuomerera pane zvauinazvo. Muchokwadi, ini ndanga ndatofananidza iyo Macbook neIProX, uye iyo kubva kufekitori yeValencian yakabuda chaizvo. Zvakanaka, kana iwe ukawedzera kune iyo yakasimba CPU uye neGPU ine simba, ye € 1199 chete, zvinhu hazviratidzike zvakashata ... Saka hausisina chikonzero chekutenga Macbook uye kurimisa kuti riise yako yaunofarira GNU / Linux kugovera.
Hongu € 1199 yeiyo enviable Hardware, kuti kubvira NHASI UNOGONA KUFANIRA KUTENGA kubva pano kuti ubatsirwe nemutengo uyu, kunyange hazvo zvikamu zvechitoro zvichatanga kusvika muhafu yepiri yaZvita wegore rino.
Uye kana iwe uchinetseka kuti chii ichi Slimbook PROX 15 inofanira kunge iri Apple Macbook mhondi, saka heano mamwe acho features:
CPU- Iwe une Intel Core i7-9750H maringe neiyo ProX's Core i7-10510U. Iyi chip nyowani ine 6 cores, inovandudza gumi neshanu tambo mune yakafanana, uye inogona kusvika ku16Ghz wachi frequency. Iyo zvakare ine 4.5MB ye SmartCache. Izvo zvinoshandura kusvika ku12% kuita zvirinani mune mabenchmark eCUU mabhenji
GPUKana iwe uchida kutamba kana kushanda ne graphic dhizaini, iyo nyowani NVIDIA GeForce GTX 1650 iyo inodarika iyo NVIDIA MX250 yeProX uye zvakanyanya kupfuura iyo Intel UHD yePro Base. Iyo MX250 inowana mabhenji mabhenji kuita kwe22.2%, nepo 1650 nyowani ichirova 99.35%.
RAM: kubva ku8GB DDR4 kusvika 32GB.
Self Storage: SSD kubva ku250GB M.2 kusvika 1TB SSD M.2 NVMe (Western Dhijitari kana Samsung). Uine sarudzo dzekuisa yechipiri hard drive kusarudza uye RAID kumisikidza (RAID 0 uye RAID 1). Ndokunge, Kubvisa (kunogovera iro data pane ese ari maviri madhiraivhu akaomarara sekunge aive one) kana Mirror (kuteedzera zvese kubva SSD1 kusvika SSD2 segirazi kuve ne backup).
Screen: iyo skrini nyowani inokura kusvika 15.6 ″ ine 100% sRGB IPS LED pani, ichienzaniswa ne13 ″ yeiyo ProX.
Bhatiri / Kuzvimiririra: bhatiri rayo rinotenderwa kusvika kumaawa gumi nemaviri kuenda kuFoni yeMark bvunzo.
Yekhibhodi: backlit. Kubvira kwekusarudza marongero ES (Spanish yeSpain), UK (Chirungu kuUnited Kingdom), US (Chirungu kuUS), kana DE (ChiGerman).
Operating system: unogona kusarudza No-OS (isina chinhu), kana neUbuntu, Debian, Linux Mint, yekutangaOS, Manjaro, nezvimwe.
Extras: kumeso kumeso uchishandisa Linux PAM module.
Kubatana: USB 3.0, USB-C, USB 2.0, HDMI, RJ-45, WiFi, Audio Jack.
zvinhu: icho chigadzirwa chine dhizaini yakanaka kwazvo uye kupedzisa kwemhando ine magnesium uye aluminium alloy.
Kukura uye uremu: 16 mm gobvu uye 1.5 kg.
Mutengo: Ndatotaura kuti iri € 1199, zvichienzaniswa ne € 2699 yeMacbook kana € 1725 yeDell XPS 15 2019. Hazvina kushata zvachose, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Slimbook PROX 15: iyo nyowani ultrabook Apple Macbook mhondi
Pamari shoma unowana zvakafanana zvinhu. Ivo havana apple aesthetics asi kwandiri mari yakakosha kupfuura aesthetics.
Ini handichinje XPS yangu 15 7590 yeiyo kana kufa, iyo 1.900 € yakadyarwa zvakanakisa muhupenyu hwangu hwese.
Pindura kuna Char
Gadzira kugovera kweLinux. Zvinogona kukutorera makore makumi maviri mujeri